Itoobiya Ayaa Bari Bilaabaysa in ay Koronto ka Dhaliso Biyo-xidheenka Niilka ee Muranka Dhaliyay. – Rasaasa News
Itoobiya waxay bilaabi doontaa in ay koronto ka dhaliso biyo xidheenkeeda weyn ee wabiga Niilka Buluuga ah maalinta Axadda ah,sida ay saraakiisha dawladdu u sheegeen AFP, taas oo guul weyn u ah mashruuca muranka dhaliyay.
Biyo-xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), oo lagu wado inuu noqdo mashruuca ugu weyn ee korontada laga dhaliyo Afrika, ayaa udub dhexaad u ahaa khilaafka gobolka tan iyo markii ay Itoobiya bilawday sanadkii 2011-kii.
“Berito waxay noqon doontaa tamartii ugu horaysay ee biyo-xidheenka,” ayuu yidhi sarkaal ka tirsan dawladda Itoobiya Sabtidii.
Sarkaal labaad ayaa warkan xaqiijiyay. Labaduba waxay ka gaabsadeen in magacooda la shaaciyo sababta oo ah horumarka aan si rasmi ah loo shaacin.
Waddamada dariska la ah Itoobiya ee Masar iyo Suudaan ayaa biyo-xidheenka u arka khatar, sababta oo ah waxay ku tiirsan yihiin biyaha Niilka, halka Addis Ababa ay u aragto inuu muhiim u yahay koronto iyo horumarkeeda.
Ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxday Qaahira iyo Khartoum, kuwaas oo Itoobiya ku cadaadinayey inay saxeexaan heshiis dhammaystiran oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqaynta biyo-xidheenka tan iyo markii ugu horaysay ee shaqada la bilaabay.
Saddexda dawladood waxay qabteen dhawr wareeg oo wada-hadal ah, laakin ilaa hadda ma jirto wax calaamad horumar ah oo laga gaadhay.
Mashruucan oo ay ku baxayso 4.2 bilyan oo dollar ayaa ugu dambayntii la filayaa in uu soo saaro in ka badan 5,000 oo megawatt oo koronto ah, taas oo ka badan laban laab midda tamarta korontada ee Itoobiya.
Itoobiya ayaa markii hore qorshaynaysay wax soo saarka ku dhawaad ​​6,500 oo megawatts, balse markii dambe waxa ay yaraysay yoolkeedii.
“Korantada cusub ee laga dhaliyo GERD waxay gacan ka gaysan kartaa dib u soo noolaynta dhaqaalaha ay burburiyeen xoogaggii isku dhafka ahaa ee dagaalka lagu hoobtay, kor u kaca qiimaha shidaalka iyo masiibada Covid-19,” ayuu yidhi Addisu Lashitew oo ka tirsan Machadka Brookings ee Washington.